REER-GAROOWE: MAHAD MUDAN
Gobalka waqooyi galbeed ee Soomaaliya, oo isugu yeeray “dal madax-bannan”, waxaad moodaa inay siyaasada ka lunsan tahay. Waxaa wax laga naxo ah siyaasada qob-qobka ku dhisan oo ay wado gobalka waqooyi galbeed “Somaliland”. Siyaada ku dhisan magaalooyinka Hargaysa, Burco iyo Berbera inay ka baxaa dadka aan u dhalan gobalkaas waa qabiil iska cad, oo ay macnaheedu tahay, dadkaan Isaaq aheyn ha ka baxaan dadka.
Waxaan weyddiinayaa ragga hoggaamiya waqooyi galbeed ama Somaliland: Miyaanay danta gobalkiina iyo danta guud ee Soomaaliyeed aheyn in dadka Soomaaliyeed aan lakala qob-qobin, oo la isu daayo?
Toddbaadkii tegay waxaa dhabaha dheer ee isku xira Boosaaso ilaa Garoowe iyo Garoowe ilaa Gaalkacyo ku rogmaday 2 gaari, waxaana ku dhintay dad gaaraya ilaa 26 qof. Dadka ku nool Garoowe, mahadi ha ka gaadhee, waxay muujiyeen karti iyo dadaal dheeraad ah, oo ay ka muuqato xil-kasnimo, walaalnimo, muslinimo iyo Soomaalinimo, ka dib goortay u gurmadeen maatadii ku dhimatay halkaas
Magaalada Garoowe waxaa la kiciyey dadweynihii,iyagoo xaynxeyn ah ayaa ugu gurmadeen goobihii shilku ka dhacay, waxaana dadkaas la dhigay isbitaalka ku yaala magaalada.
Waxaanse ka xumahay in aanay jirin cid ka hadashay, kana dooday cidii shilka foosha xun ku geeriyootay, waayo waxay ahaayeen dad u dhashay qabiilo aan awood lahey, una badan hooyooyin iyo carruur, taasna waxaan ku eedanayaa qalabka warbaahinta ee Soomaalida.
Maamulka waqooyi galbeed, ha ogaadeen, iyagaa ayaa ka mas’uul ah dhibkii iyo geeridii soo gaaray maatada Soomaaliyeed, waayo iyagoo iyagaa ka soo eryey dhulkii ay ku noolaayeen, waxaanse mahad leh dadka reer Garoowe ee u guntay gargaarka maatadaas.
Ugu danbeyn, waxaan u soo jeedinayaa dadka reer Koonfur in aanay soo eryin, wax dhibaato ahna u gaysan dadka reer waqooyi ee ku nool gobalada Koonfureed, waayo waa dad maato ah, oo aan wax dhibaato ah gaysan, siyaasadna aan shaqo ku laheyn